WAXYAABAHA KALA DUWAN EE MACAAN "LIIBIYA" - VITICULTURE
Canabku waa mid aad u faa'iido badan oo leh cawska.
Waxaa intaa dheer, noocyada kala duwan waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo ah ma aha oo kaliya dhadhanka, laakiin sidoo kale size, qaababka iyo midabada.
Laakiin caleemo badan oo badan, waxa ugu muhiimsan waa wakhti ku habboon canabka.
Arrintani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay gobollada leh jawi qabooban, halkaas oo noocyo dambe laga yaabo inaysan waqti u haysan.
Xaaladdan oo kale, noocyada ugu fiican ee heerkoodu sareeyo, taas oo ah canab "Liibiya".
Ka dib oo dhan, noocyada kala duwan ee hybrid ma aha oo kaliya faa'iido ee marxaladaha hore ee Bisaylkiisa, laakiin sidoo kale in ay diidmada sare ee dhaawaca cudurka.
Sidaa darteed, sii kordhaya canab ah sida fudud. Faahfaahin ku saabsan isaga.
Faahfaahin ku saabsan dhammaan sifooyinka kala duwan ee canab "Liibiya"
Kala duwanaanshahan waa mid aad u yar. In diiwaanka noocyo sabiib ah ee Ukraine canab "Liibiya" muuqatay kaliya bilowgii 2011. Waxaa la helay sababtoo ah isgoyska noocyada noocan oo kale ah sida "Flamingo" iyo "Arcadia" cilmi baaris V.V. Zagorulko. Kala soocaa caansaankiisa sababtoo ah xajmiga weyn ee canab iyo miraha.
Noocyada kala-duwan ee dalagyada canab "Liibiya"
Qaybaha canab "Liibiya" ayaa inta badan aad u ballaadhan oo dhererkoodu dheer yahay. Iyaga miisaanka laga bilaabo 600 garaam ilaa 1 kilo, dhererka hal farabadan ayaa noqon kara qiyaastii 25 sentimitir iyo wax ka badan. Qaab dhismeedka, dalagyada canabkani waa cylindric, inkasta oo ay inta badan yihiin kuwo gebi ahaanba aan la isku halleyn karin iyo laan duursan. Ma aha meelaynta cufan ee berry on khaanadda ka dhigo mid dhexdhexaad ah. Si kastaba ha ahaatee, sifooyinkaas oo dhan ma yaree quruxda dibadda ee dalagyada canab "Liibiya".
Berry of this canab sidoo kale leeyahay size weyn. Marka la eego qaabkeeda oval ama ovoid, dhererka berriga waa celcelis ahaan 2.8 sentimitir, celceliska qiyaasta waa 1.8-2 sentimitir. Celcelis ahaan miisaankoodu wuxuu ku jiraa "Liibiya" waa 11-13 garaamtaas oo ah wax aad u badan oo loogu talagalay warshadan. Marka la eego midabka maqaarka, kala duwanaanta canabka this waa casaan. Muuqaal aad u kala duwan oo maqaarka ah ayaa ah in ay si aan caadi ahayn u jilicsan tahay canabkani iyo marka la cuno oo keliya jilicsanaanta.
Sida saxarka berriga, waxaa ku jira canab "Liibiya" waxay leedahay qaabdhismeed qalafsan. Saxarka waxaa ku jira qadar aad u weyn oo casiir ah, taas oo canabkani qiimeeyo. Tilmaamaha dhadhanka canabku waa kuwo aad u fiican: waxay isku daraan midhaha macaan ee macaan iyo macaan jilicsan.
Dhadhanka iyo dhadhanka waxaa lagu xafidaa canab si aan isbeddel lahayn inta lagu jiro bilaha kaydka.
Sida asaaska kiimiko ee saxarka, waxay ka kooban tahay heer aad u sarreeya oo sonkor ah - qiyaastii 17-18%. Isla mar ahaantaana, acidity ee hal litir oo casiir ah sabiib ah ee kala duwan ee lagu qeexay kaliya 5 ilaa 9 garaam. Abuurka berrito waa 1-3 oo kaliya, sababtoo ah awoodda fudud ee laga soocayo qashinka, waxay si caadi ah u dhibeysaa habka cunidda canabka.
Ujeedada ugu weyn ee canabka this waa miiska koorsada. Waxaa badanaa loo isticmaalaa foomka miiska, maadaama noocyada kala duwan aan la qaadi karin. Isla mar ahaantaana, waxaa la koray xitaa beeraha warshadaha iyo waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka canab. Si ay u iibiyaan noocyo kala duwan sidoo kale waa mid soo jiidasho leh sababtoo ah muuqaalkiisa quruxda badan, si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah nolol maalmeedka gaaban, jihadaas ee noocyada kala duwan ma aha mid aad u ballanqaad.
Erayo yar oo ku saabsan sifooyinka daaqa iyo heerarka beergooyska ee canab "Liibiya"
Qiimaha noocyada kala duwan ee canabka ee la tilmaamay ayaa sidoo kale ku jira heerar sare oo deggan. Isla waqtigaas, rucubyadii ugu horreeyay ee canabku waxay ka muuqdaan duurka "Liibiya" sannadkii saddexaad ka dib markii ay soo degtay meel joogto ah. Bisaylkiisa canabku waa mid aad u adag tan iyo markii ay timaaddo 105-110 maalmood ka dib soo galo baadiyaha inta lagu jiro xilliga daaqsinka. Beeritaanka Beerka waxaa lagu calaamadeeyaa gebi ahaanba dusha sarreeya. Haddii baadiyaha ay ka badan yihiin - 70-80 boqolkiiba oo keliya dalagga ayaa kori kara.
Cunto noocan oo kale ah ee kala duwan ee this waxaa suuragal ah sababtoo ah baadiyaha waaweyn oo xoog leh, taas oo ay ku faani karto. Gaar ahaan, waa la jiidi karaa si aad u sareysa xagga sare haddii aan la jarin. Kordhinta baadiyaha. Waa in la ogaadaa faa'iido weyn oo ku saabsan noocyada kala duwan, taas oo ah karti-u-kicinta is-isu-dhajinta. Sidaa darteed, canab ah "Liibiya" waa mid ku habboon beeritaanka hal keliya.
Waxtarka miraha "Liibiya" - taas oo noocyo kala duwan lagu ammaano
Shaki la'aan, shuruudda ugu weyn ee kala duwan ee noocyada kala duwan ee loogu talagalay dad badan oo beereed dhulkooda u gaarka ah waa kooxo aan hagaagsaneyn iyo miro fiican oo dhadhan. Hase yeeshe, waxaa jira tiro faa'iidooyin kale ah:
Kala duwan waa mid u adkaysata dhaxan. Qoryaha geedka canabka ah ma waxyeelo xitaa marka heerkulku hoos u dhaco -21 ° S, laakiin xaaladaha jawiga cimilada leh, geedka canabka ah waa in la daboolo xilliga jiilaalka.
Canab "Liibiya" waxay leedahay diidmo aad u sareysa cudurada noocaan oo kale ah oo beero canab ah sida xagta.
Jawaab aad u wanaagsan oo ku saabsan daryeelka saxda ah iyo quudinta, ku faraxsan dalagyada weyn.
Bisaylkiisa hore ee canab.
Liibaanta iyo noocyada kala duwan ee "Liibiya"
In kasta oo xaqiiqda ah, guud ahaan, kala duwanaantani waxay leedahay muuqaal aad u soo jiidasho leh sababtoo ah midabka casaanka ah ee aan caadiga ahayn, mar walba ma heleyso midabada la sheegay xilligii bisaylka. Ka sokow Iskudhin canab "Livia" ka hor inta aan dharabku ku filnayntaas oo u baahan daaweyn joogta ah oo leh diyaar garow gaar ah.
Beerta laga beerto "Liibiya" - sida loo koro geed wanaagsan oo midho dhal ah?
Arrimaha laga beerto, kala duwanaanta canabka ayaan haysan wax khilaaf ah iyo shuruudo gaar ah, taas oo ay ka duwan tahay kuwa guud ahaan la aqbalo. Si kastaba ha noqotee, si canabku u noqdo mid aad u fiican oo midho leh, waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah xafladaha si loo tixgeliyo.
Sidee loo beeraa canab "Liibiya" - sapling ama xoqin?
Xaqiiqdii, nooca dalaggu wax badan maaha. In kastoo, kiis kasta waxaa jira faa'iidooyin:
Thanks Beerto geedka canabka ah ee xididdadiisa u gaar ah Waad ku guuleysan kartaa natiijooyinka kobaca wanaagsan ee baadiyaha canabka ah. Intaa waxaa dheer, in kiisaska intooda badan, sida beerto sida calaamad u jilicsan ee canab.
Iyadoo adoo raacaya miraha "Liibiya" oo ku yaalla beertii beertii hore waxaad ku gaari kartaa si dhakhso ah geedka geedka canabka ah. Intaa waxaa dheer, sano ee ugu horeysay ee fruiting ayaa lagu kala saari doonaa by dhalidda sare, marka loo barbar dhigo geedo beeray isla sannadkaas.
Si kasta ha noqotee, waa masuuliyad aad u mas'uulka ah oo u baahan in la wajaho arrinta diyaarinta qalabka beeritaanka. Haddii kale, goynta ayaa laga yaabaa inaysan xidid ku jirin dhammaanteed, waxaana lagaa tagi doonaa canab la'aan. Gaar ahaan, sida jarista beeritaanka on xididdadiisa, iyo tallaalka, waa in ay leeyihiin 2-3 peepholes. Si loo beerto canab by sapling, jarida waa in ay leeyihiin xididada wanaagsan by waqtiga beerto.
Gaar ahaan si taxadar leh in xididada waa noqon marka aad hesho seedling ah. Waa inay ahaadaan kuwo caddaan ah, oo aan lahayn qabow, waxyeello oo aan la qalajin. Sidoo kale, gooyo ee seedling waa cagaaran, taas oo sidoo kale muujinaysaa awoodda wanaagsan ee xididka at degelka dhulka. Ka hor inta beerto, seedling waa in si fiican loo qooyay biyo.
Nidaamka asaasiga ah waxaa lagu daaweyn karaa qalab gaar ah oo kicin kara kobaca xidid. Ka hor intaan si toos ah loo soo degin talooyinka ee xididdada seedling canab ah waxaa lagula talinayaa in la gooyo wax yaradoo isticmaalaya mindi aad u fiiqan (pruner).
U diyaargaroobidda isugeyntii loo yaqaan 'grafting' ayaa sidoo kale waqti badan qaadata. Waxa ugu muhiimsan waa inaad si sax ah u gooyso oo aad u fiican. Kaliya qeybta hoose ayaa la xoqay, oo ka hooseysa hoosta hoose ee hoosta. Waa lagama maarmaan in la gooyo labada dhinac. Laga soo bilaabo laba qaybood oo aan gudnayn, kuwa loo yaqaan "khatka" waa inay sii joogaan. Qaybta sare, qaybta aan la jarjirin ayaa lagula talinayaa inay wax ku yeeshaan.
Tani waxaa la sameeyaa si loo jarjarey canabku waxay u sii fiicnaan karaan qoyaanka waxayna noqdaan kuwo u adkaysta arrimo kale oo xun. Nidaamkan waxaa loo fuliyaa si dhakhso ah, oo kaliya iyadoo si deg deg ah hoos loogu dhigayo jarista qashinka lagu shubay biyaha. Ka dib markaa, jirku si degdeg ah ayuu u baahan yahay in la qaboojiyo biyaha.
Qeybta hoose ee jarista, si aad u kiciso rooting, waxaa lagula talinayaa in la dhigo ka hor inta aan la gooyin biyaha. Sidoo kale, waxaa lagu daaweyn karaa xal u kicinaya koritaanka xididdada daroogada, iyo sidoo kale waxa lagu sameeyaa dhalmo.
Doorashada goobta, ciidda iyo waqtiga saxda ah ee sannadka beerashada canab
Goobta beeritaanka geedka asalka ah waa in si fiican loo iftiimaa qorraxda. Sidaa darteed, marka la eego baahida loo qabo in lagu koro canabka "Liibiya" oo kor u kacsan, waxaa fiican inaad ku beerato dhinaca koonfureed ee dhismayaasha guryaha. Marka laga reebo biyaha qaboojiyaha, waxay weli u adeegi doonaan sida ilaalinta dabaylaha qaboobaha ee waqooyiga.
Xulo dooro ciidda canab "Liibiya" maaha mid adag, sababtoo ah canabkani ma aha mid madaxbannaan. Sidoo kale, cilladaha carrada waxaa lagu dhajin karaa nafaqooyin joogto ah oo nafaqo leh. Si fiican loamy ciidda iyo chernozem, leh awood dheellitir leh iyo biyaha dhulka hoose si fiican u habboon.
Canab dhirta ugu fiican guga. Si kastaba ha ahaatee, for Grafting on stock ee gooyn canab, xilliga guga sidoo kale waa qumman yahay.
Geedka Cagaaran ee loo yaqaan 'Grape Grape' - Talooyinka ugu sareeya
Geedo loo diyaariyey u baahan tahay in lagu beeray god cows ah. Gaar ahaan, iyada oo qoryo dhowr jeer ka badan oo ka badan xididdada seedling ah, in ka badan kala badh booska u baahan yahay in la buuxiyo humus. Waa wax ku ool ah in laysku daro humus leh ciidda bacrin ah, iyo ka dib marka la buuxiyo isku dhafan godka, si ay u daboosho bacriminta lakabka kale ee carrada laakiin aan lahayn Bacriminta (haddii kale waxaa jira halis ah gubista xididdada canab).
Marka xigta, qaado seedling lafteeda oo u daadi godka, qoorta xididka dul saaran. Buryahaan si taxadar leh u soo jiido sababtoo ah niyadjabnimada xididada. Ka dib markaa, ee ku xigta sapling, oo ka fiican dhinaca waqooyiga, waxaa lagula talinayaa in lagu qodo taageero adag, kaas oo ku nasan doono koritaanka. Sidoo kale, ka dib markii laga beerto, seedling canabkuna si fiican ayuu u waraabiyay 3 baaldiyo oo biyo ah.
Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka ogaato kudka saxda ah ee canab "Liibiya"
Ka dib diyaargarowga goynta loo yaqaan "grafting", waxaad u baahan tahay inaad bilowdo diyaarinta saamiyada. Marka hore, waxaad u baahan tahay in aad ka saarto baadiyaha sabiibka ah ee hore, oo keliya tegaaya 8-10 centimitir korka dusha ciidda. Marka labaad, cutada waxaa lagula talinayaa in si taxadar leh loo nadiifiyo serrations iyo isdabamarin kale si looga hortago suurtagalnimada cudurka.
Dusha sare ee dusha sare ee beertii canabka ah waxaa laga tirtiraa qashinka qashinka qoyan iyo si taxadar leh u kala qaybi dhexda dhexe. Kala qaybsanaanta waa inaysan aheyn qoto dheer, waxa kaliya oo ay leedahay in ay ku haboon tahay jarista (si fiican, ama gooyn dhowr, haddii cabbirka rootstock u ogolaanayaa).
Dheeraad ah, jirku waa inuu hoos udhigaa meeshii qayb ka mid ah qaybta la jarjaray qaybta la jarjaray oo si aad ah u leexleeyaa jilibka. Si loo xoojiyo oo loo duubo barkin, waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho dhar casri ah oo awood u leh in ay waqti isku darsadaan. Sidoo kale, goobta tallaalka waxaa lagula talinayaa in ay ku dhalaaliso dhoobo, taas oo gacan ka geysan doonta sii-haynta qoyaanka ee rootstock.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan daryeelka canab ah ee dayrta.
Daryeelidda geed daan ah "Liibiya": siyaabo lagu kordhiyo dhalidda
Wixii dalagyo si joogta ah u sarreeya, canab sida "Liibiya" oo ah dhaqan dhaqameed loo abuuray waxay u baahan yihiin daryeel habboon oo joogto ah. Muuqaal farabadan oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah waa canab in badanaa laga sameeyay qaybta hoose ee baadiyaha. Isla mar ahaantaana, inta lagu jiro Bisaylkiisa ee rucubo, ma aha lagama maarmaan in la jeexo caleemaha kor ku xusan, inkastoo ay si xoog leh lagula talinayaa in ay tan u sameeyaan noocyo kale. Tixgeli waxyaabaha kale ee daryeelka.
Canabku wuxuu u koraa si wanaagsan xayawaanka si fiican u qoyan, inkastoo ay aad u khatar badan tahay in la dhaafo waraabinta. Si fiican u biyaha biyaha canabkiina laba jeer oo keliya xilli.: ka hor iyo ka dib ubax geedka canabka ah. Waraabinta ayaa sii kordheysa oo kaliya haddii ay dhacdo abaaro. Waa arrin aad muhiim u ah in la tixgeliyo in dhibcaha si lama filaan ah ee qoyaanka ee canab ah ciidda ku toogto karaa.
Ciidda ku wareegsan beertii canabka ahayd ayaa aad u faa'iido badan leh oo lagu hirgeliyo iyo mulch. Ka dib oo dhan, mulch ma aha oo kaliya in ay ku hayn qoyaan ee ciidda iyo fuliyaan hawl ilaalinta inta lagu jiro cimilada qabow iyo qabow, laakiin sidoo kale waxay quudin karaa canab. Ka dib oo dhan, beeraha canabka ah ee mulch badanaa loo isticmaalaa humus madaxbannaan, kaas oo ku daboolan dusha ciidda leh lakabka of ku saabsan 3 sentimitir. Waxaa lagula taliyaa in lagu daboolo ciidda oo keliya xilliga guga iyo dayrta.
Marka lagu daro quudinta canab iyadoo leh Bacriminta dabiiciga ah ee lagu dabaqo carrada by mulching, Warshadani waxay sidoo kale si fiican uga jawaabtaa Bacriminta macdanta.. Gaar ahaan, canab waxay leeyihiin baahi weyn oo loogu talagalay Bacriminta, oo ay ku jiraan potassium iyo fosfooraska. Waxaa ugu wanaagsan in la dalbado bacrimin xilliga dayrta goor dambe, inta lagu jiro muddada uu duurka horey u seexdo iyo ciidda aysan awood u lahayn in ay u gudbiyaan jiilalka horay u guga.
Si canab ah si fiican u guuleysto oo aan waxyeello dhaxan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daboolo jiilaalka. Tani waxay si gaar ah u tahay dhabta "Livia" kala duwan, tan iyo meeraha sare, oo taas oo canabka this aan waxyeello, kaliya -21 ° S. Si loo daboolo boogta gebi ahaanba, waa in ay ahaataa mid aad u wanaagsan oo loo yareeyo dhulka. Waxaad dabooli kartaa ciidda, dhirta iyo filimada. Waa mid aad u muhiim ah in la daboolo canabka la beeray oo keliya. Wixii buug aad u weyn weyn ama tuubo, oo hoosta ka maqan, ayaa si fiican u adeegi doonta. Ku dhajinta agagaaraha oo lagu daboolay ciid, waxaad si fiican uga ilaalin kartaa barafka.
Canab dhoobada ayaa ah midda ugu muhiimsan ee looga baahan yahay canab si qurux badan. Wixii Livia, gaabinta gaaban ee kaliya 2-6 indhaha waxaa loo arkaa mid la aqbali karo. Marka la sameynayo baadiyaha, waa muhiim inaad ka baxdo 3-4 gacmo gaaban, oo sidoo kale loo baahan yahay in la gooyo dayrta. Sidoo kale, waxaa aad u muhiim ah in la xakameeyo beergooyka adoo ka saaraaya ugxan aad u badan. Xaqiiqdii, marka ay ka badan tahay baadiyaha, canabku ma awoodi doono inuu u rusheeyo si fiican.
Qaar ka mid ah "Livia" ayaa badanaa saameyn ku yeelan kara cudur sida tusaale ahaan burka dhoobo. In si waxtar leh looga hortago, buufin joogta ah oo ka hortag ah baadiyaha sabiib ah. Tirada lagu taliyay ee buufinaha hal xilli - 2: mid ayaa la qaadaa ka hor inta ubax, labaad - ka dib. Cunto la qabadsiiyay cana ah.